Ifulethi le-Glass loft - umbono omuhle kakhulu we-tromsos - I-Airbnb
Ifulethi le-Glass loft - umbono omuhle kakhulu we-tromsos
Tromsø, Troms, i-Norway
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Justin
U-Justin Ungumbungazi ovelele
Lokhu kungenye yezindawo zokuhlala ezihluke kakhulu edolobheni laseTromsø elinegumbi lokuhlala eligcwele ingilazi elibheke ezintabeni. Jabulela ukubuka okuhle emini, futhi ungahle uthi shazi amalambu asenyakatho kakhulu ebusuku usuka egumbini lokuphumula, noma kuvulandi.
Iyunithi ingu-41kvm isiyonke.
Leli fulethi liza nendawo yokupaka yamahhala
Sicela uqaphele ukuthi leli yifulethi elisezingeni eliphezulu lendlu. Ifulethi liyimfihlo, azikho ezinye izihambeli futhi uzoba nendawo yakho yokungena yangasese
-Indawo yokupaka mahhala
-I-wifi yamahhala (ikhodi iku-router)
-Sicela uqaphele ukuthi leli yifulethi elisezingeni eliphezulu elinezindonga zophahla oluyimithambekayo, ngakho-ke angincomi abantu abangaphezu kuka-2 ukuze bathole ukunethezeka okukhulu. Uma ungaphezu kuka-185cm ubude, kungase kudingeke ugobe endlini yangasese lapho umile. Futhi, sicela uqaphele ukuthi ingilazi esendlini yokuphumula isho ukuthi leli gumbi alinakho ubumfihlo obuphelele. Ikamelo lokulala, ikhishi kanye negumbi lokugezela linobumfihlo obugcwele. Kuke kwaba nezinja ngaphakathi kweyunithi ngesikhathi esisodwa, izinwele ezimbalwa ezilahlekile zingase zisale naphezu kwemizamo emikhulu yokuhlanza. uma uguliswa yizinja zincoma ukuthi ungabhuki ngenxa yalesi sizathu
4.95 · 133 okushiwo abanye
I-Malselvgata ingenye yezingxenye ezindala ze-Tromsø enezindlu ezisukela ngaphambi kweMpi Yezwe 2. Le ndawo ibheke enkabeni yedolobha futhi iwuhambo olufushane nje lwemizuzu eyi-10-15 ukusuka ezindaweni ezikhangayo ezinkulu enkabeni yedolobha.
-kutholakala ngocingo noma nge-imeyili (kuzonikezwa isiqinisekiso sokubhukha).
UJustin Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Tromsø namaphethelo